Pakistana: Fanakanana ny Youtube tamin’ny ampahany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2019 3:27 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Febroary 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nanome baiko (jereo etsy ambony) ny mpamatsy tolotra aterineto ao amin'ny firenena mba hanakana ny fidirana amin'ny vohikala fifampizarana lahatsary YouTube noho ny filazana fa nampiseho lahatsary manevateva ny Manampahefanan'ny Fifandraisandavitra ao Pakistana (PTA).
Na izany aza, sy araka ny nolazain'ny bilaogy Pakistaney “Don’t Block The Blog” dia misy antony roa no mety hanazavana ny hetsika avy amin'ny PTA handràra ny YouTube: ny lahatsarin'ny hala-bato nampiseho ilay lazaina fa porofon'ny fifidianana hosoka tao Karachi sy ny lahatsary manevateva nanala baraka ny Mpaminany Mohammed.
Pejy voasakana tao Pakistan (Sary: National Blockpages Gallery tao amin'ny Don’t Block The Blog)
Nanentana ny mpanjifany hanoratra tany amin'ny Youtube mba hanesorana ilay sarimihetsika nanohintohina ny mpamatsy tolotra aterineto sasany tao Pakistana :
Ry mpisera Aterineto
Nanome baiko ny mpamatsy tolotra aterineto rehetra ao amin'ny firenena hanakana ny fidirana amin'ny tranonkala www.youtube.com noho ny fisian'ny votoaty/lahatsary manevateva ny manampahefanan'ny Fifandraisandavitra eto Pakistana (www.pta.gov.pk) .
Hijanona ho voasakana ilay tranonkala mandra-pahatongan'ny baiko hafa avy amin'ny PTA. Mandritra izany fotoana izany, afaka manoratra any amin'ny youtube.com ireo mpisera aterineto mba hanesorana ireo votoaty/horonantsary manohintohina satria ahafahan'ny manampahefana mandidy ny fanalana ny sakana amin'ity tranonkala ity io fanesorana io .
Ny lahatsary iray navoaka tao amin'ny Youtube sy ny adiresy IP miisa telo izay anisan'ny mpamatsy tolotra ihany aloha tamin'ny voalohany no saika hanaovana ny fandraràna kanefa toa nakaton'ny ISP sasany ny tranonkala iray manontolo :
Samy nanatri-maso ny sakana natao tamin'ny sehatra iray manontolo tamin'ny votoaty rehetra tao amin'ny youtube.com izahay hatramin'ny omaly ary efa nohamafisinay ny tatitra fa nitranga manerana ny firenena izany. Androany, nisy lehilahy tsara fanahy nizara taminay ny pikantsary nalaina tao amin'ny solosainany nampiseho ny tranonkala youtube tsy voasakana intsony saingy voasivana ho an'ny mpisera TWA rehetra ilay URL nanohintohina manokana. Fanazavana fohifohy, maka fifandraisana amin'ny backbone FLAG amin'ny alalan'ny rohy PTCL / PIE ny mpamatsy tolotra aterineto any Pakistana saingy nisafidy ny handalo amin'ny alàlan'ny dingana hafa any amin'ny TransWorld ny sasany amin'ireo mpamatsy tolotra aterineto.
Saingy tsy manana ny fahafahana hampihatra sakana manokana amin'ny adiresy URL anefa ny PIE ary voatery mampiasa sakana ny IP lehibe. Milaza izahay noho izany fa ny sehatra Youtube iray manontolo no tsy azonay idirana fa ny TWA kosa manana rafitra fanivanana manaraka ny toetr'andro sy afa-manakana rohy iray manokana .
Tsidiho ny “Access Denied Map” ho fampahafantarana misimisy kokoa momba ireo firenena manakana ny fidirana amin'ny tranonkala mitovy amin'ny Youtube sy ireo fampiasa web 2.0 hafa.